Im na-ebuli ebe ị na-adọba ụgbọala elu site na Mutrade ihe ngwọta dị iche iche
Elu àgwà mmepụta ọnọde kasị pụrụ ịdabere na mụ akụrụngwa
Nkwado ndị ọkachamara ọkachamara na ntinye na ndozi oge niile
Qingdao Mutrade Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị mbụ ọkachamara n'ibu na-adọba ụgbọala ngwọta na enye na CHINA. Anyị na-agba mbọ ka
nye ndi ahia anyi ahia kachasi nma ma di onu ahia n’uwa niile.
Ngwaahịa ọ bụla Mutrade wetara anwalela ma melite ya otu narị ugboro ugboro n’ime afọ iri gara aga. Designs, ihe, mmepụta usoro, gụchara na mbukota a na-emelite na-enye ndị ọzọ na ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na-adọba ụgbọala lifts maka ndị ahịa anyị.
Mutrade na-adọba ụgbọala sistemụ na-enye ndị ọrụ ohere ịkwalite ebe a na-adọba ụgbọala n'ụzọ dị mfe site na ngwọta dị mfe, ntinye ngwa ngwa, ọrụ dị mfe yana mmezi ọnụ ala.
A na-eme ka ihe owuwu ahụ sie ike nke ọma iji buru ụdị ụgbọ ala dị iche iche. Nwalere site n'ọtụtụ ule na-adabere n'ụkpụrụ siri ike na mba dị iche iche, obi abụọ adịghị ya na ngwaahịa niile sitere na Mutrade nwere ike ịtụkwasị obi mgbe niile iji kpuchido ndị ọrụ na ụgbọ ala.
90+ mba arụnyere
Ọtụtụ atụmatụ nchekwa
20000 + na-adọba ụgbọala ahụmahụ
Advanced Design, kpọmkwem Manufacturing
BDP-3: Hydraulic Smart Car na-adọba ụgbọala Systems 3 L ...
Starke 3127 na 3121: Bulie ma na-ebugharị Automa ...
BDP-2: Hydraulic Automatic Car Parking Systems ...
Starke 2227 & 2221: Ejiri Post Twin abụọ ...
Starke 2127 na 2121: Ugboro abụọ ụgbọala abụọ ...
Starke 1127 & 1121: Oghere kacha mma nchekwa 2 C ...
Hydro-Park 3230: Hydraulic Vetikal Elevating ...
Mfe Ichekwa Mfe
Nyochaa ụzọ dị mfe iji bulie ebe a na-adọba ụgbọala site na ihe ọhụrụ na teknụzụ nke Mutrade
Akpaghị aka na-adọba ụgbọala Systems
Chọta ahụmịhe banyere etu esi eji igwe eji amị anwụrụ Mutrade ọhụụ na-ewetara oghere ụgbọala karịa ka iche n'echiche.
Ahụmịhe klaasị mbụ
Mutrade ụgbọ ala na-ebuli elu na sistemụ na-enye ụfọdụ ihe okike maka ebe a na-adọba ụgbọala na-abawanye iji nwekwuo ohere ị na-adọba ụgbọala, na-ebuli arụmọrụ nke ọma na usoro nke ị na-adọba ụgbọala.
Anyị na gị na-arụ ọrụ iji chọta azịza!
Ndị ọkachamara nwere ọtụtụ afọ nke ihe ọmụma dị njikere ịmepụta ihe ndị a na-adọba ụgbọala maka oghere ị chọrọ. Nweta nkọwapụta ozugbo!
S-VRC: Scissor Type Hydraulic Heavy Duty Car Lift Igwe Mbuli
Hydro-Park 3230: Hydraulic Vertical Elevating Quad Stacker Car Park Platform
Starke 3127 & 3121: Ebuli na Slide Automation Car Parking System with Underground Stackers
BDP-6: Ọsọ Egwuregwu Car nke nwere ọgụgụ isi ọtụtụ ọrụ Speeds
Puzzle Mbukota System , Anọ Post Car Igwe Mbuli , Ugboro abụọ na-adọba ụgbọala, Puzzle Car Mbukota System , Anọ Post Mbukota System , Abụọ Post Car Mbukota ebuli ,